China 5T flake ice igwe ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ngwaahịa | Herbin Ice Systems
5T / day flake ice igwe na-eme 5 tọn ice flakes kwa ụbọchị, n'ime awa 24 ọ bụla.
Anyị na-enye igwe igwe ice ice 5T / day. Elu àgwà na 2 afọ akwụkwọ ikike. Anyị raara onwe anyị nye flake ice igwe kemgbe 2009, na anyị igwe ekpuchi ọtụtụ nke European na American ahịa. Anyị na-atụ anya ijere gị ozi na teknụzụ ice na-echekwa ike.
1. Ice mere anyị 5T / ụbọchị flake ice igwe.
Ice flakes mere anyị flake ice igwe na-ọma-oyi kpọnwụrụ na nke kacha mma jụrụ arụmọrụ. Ice flakes dị oke ma kpọọ nkụ.
N'ihe dị ka tọn 5 nke ụdị flakes ice dị elu enwere ike ịme kwa ụbọchị n'ime awa 24, na ice a na-arụpụta kwa ụbọchị dabere na ọnọdụ okpomọkụ 30C, 20C mmiri mmiri.
Ogologo oke mmiri dị n'etiti 1.5-2.3mm. Na ice ọkpụrụkpụ bụ kemeghi.
Dị otú ahụ ice flakes na ọtụtụ-eji maka kefriza iyak, idebe nri ọhụrụ, nri nhazi, ihe jụrụ, na osisi azụ icing, chemical were na na.
A na-eme ha site na igwe ice ice na-azọpụta flake ice, yana ike oriri maka ịme 1 tan ice flakes bụ naanị 75KWH.
2. Nkọwa nke 5T / ụbọchị flake ice igwe.
Ngwá ọrụ igwe ice anyị nke 5T / ụbọchị dabere na ikike ikuku 30C na 20C mmiri ọkụ. Na na ọkọlọtọ na-arụ ọrụ ọnọdụ, ọ pụrụ ime ka gburugburu 5 tọn ice flakes kwa ụbọchị, n'ime 24 awa.
Ejiri ọlaọcha alloy evaporator kwadebere ya, nke nwere arụmọrụ kacha mma. Okpomọkụ mgbanwe n'etiti mmiri na ngwa nju oyi nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. N'ihi nke a, igwe a na-acha ọkụ ọkụ 5T / ụbọchị na-ere naanị 375KWH nke ọkụ eletrik maka ịme tọn 5 nke ice flakes. Ndị ọzọ China 5T / ụbọchị flake ice igwe na-eri ma ọ dịkarịa ala 525 KWH nke ọkụ eletrik maka ịme tọn 5 nke ice flakes. Ihe dị iche iche oriri ọkụ kwa ụbọchị bụ 150KWH.
N'ime afọ 10, ọdịiche ga-abụ 547500 KWH nke ọkụ eletrik. Anyị na-agbakọ site na iji 150x365x10 = 547500.
Họrọ igwe ice ice m 5T / ụbọchị, ị ga-akwụ obere ụgwọ maka ụgwọ ọkụ eletrik site na ịchekwa 547500 KWH nke ọkụ eletrik na 10 afọ.
80% nke ihe ndị dị na igwe ice ice 5T / ụbọchị bụ akara ama ama mba ụwa. Maka compressors, anyị na-ahọrọ n'etiti Bitzer, GEA Bock, Frascold, Refcomp, were gabazie. N'ihi mgbali arịa, dị ka mmanụ separator, mmiri mmiri erite na na, anyị na-ahọrọ Emerson ma ọ bụ O&F, nke bụ ndị kasị ewu ewu na n'ọtụtụ ebe na maka elu àgwà friji usoro. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji valves Danfoss, ndị Fans Ziehl-Abegg, akụkụ ọkụ eletrik Schneider, were gabazie na igwe ice ice anyị 5T / day.
Nke a bụ ụfọdụ foto na ụfọdụ ihe ndozi na nkọwa dị na igwe ice ice 5T / day.
3. Oke nke 5T / ụbọchị flake ice igwe.
1 Ngalaba Ụdịdị
2 Standard ihere okpomọkụ 30 ℃
3 Inkpụrụ mmiri na-abanye n'ime mmiri 20 ℃
4 Mmiri mmiri Mmiri ohuru
5 Ịnye ọkụ 400V / 4P / 50Hz
6 Ọnọdụ ọrụ Ọfụma
7 .Dị HBF5T-R4W
8 Igwe nju oyi R404a
9 Ice kwa ụbọchị na-arụpụta ike 5 tọn ice flakes n'ime awa 24
10 Refrigeration ikike 25.3KW
11 Evaporating okpomọkụ Mwepu 18 ℃ - Mwepu 20 ℃
12 Flake ice okpomọkụ N'okpuru -5 ℃
13 Flake ice ọkpụrụkpụ 1.8-2.2mm
14 Ike oriri maka ime ice 75KWH maka ịme 1 ton nke ice flakes
15 Zụ 78dBA n'ime mita 2
16 Ike na-agba ọsọ nke igwe zuru ezu 15.625KW Ichebe ike !!!
18 Mmiri jụrụ ụlọ elu mgbapụta na ofufe moto 1.5 + 0,55 = 2,05KW
19 Ike mmiri na-ekpo ọkụ ọkụ 100KW
20 Reducer nke ice cutter na evaporator 0,55KW
21 Mmiri mgbasa mgbapụta na evaporator 0.12KW
22 Usoro njikwa Usoro njikwa PLC
23 Ice flake njupụta 900 ~ 950kg / m3
24 Ibu nke flake ice igwe 1500kgs
25 Akụkụ nke igwe akpụrụ mmiri flake LxWxH = 2300x1900x1800mm
26 Ndị ọzọ ......
4. Ihe osise nke ọkọlọtọ ice ice 5T / day flake.
Ọtụtụ ndị ahịa ga-achọ ịhọrọ igwe ice ice 5T / ụbọchị na-arụ ọrụ na otu ụlọ ice ice 3T. Nke ahụ bụkwa ụkpụrụ anyị maka osisi ice ice 5T / day flake.
Igwe ice ice nke 5T / ụbọchị dị n'elu ụlọ ice 3T.
A na-eji ụlọ a kpụkọrọ akpụkọ eme ụlọ ice a na-atụnye ya na ọkpụrụkpụ nke 100mm, ma nwee ike igbanwe ice dị n’ime ya n’enweghị agbaze ruo ogologo oge. Ice flakes na-adaba na ụlọ ice.
Icelọ ice ice 3T nwere ike ịchekwa tọn 3 nke ice flakes, nke ahụ zuru oke iji chekwaa ice flakes niile emere n'abalị site na igwe ice ice 5T / day.
Na eserese ahụ, ị ​​ga-ahụ ụlọ elu mmiri jụrụ oyi n'akụkụ akụrụngwa ice. A na-eji ya maka ịhapụ okpomọkụ n'ime gburugburu site na sistemụ ice. A na-atụ aro ụlọ elu mmiri jụrụ oyi dị na mpaghara oghere, dị ka elu nke ụlọ ahụ, na mpụga ebe a na ihe ndị ọzọ. A na-atụ aro mmiri dị mma e mere ka ọ rụọ ọrụ na mpaghara ọkụ.
Enwere ike ịhazi ọnụ ụlọ ice dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
N’akuku mmiri jụrụ condenser, anyị nwekwara ike kwadebe igwe na ikuku jụrụ condenser + ikuku jụrụ Fans. Anyị ga-echekwa sistemụ ahụ dịka okpomoku ihu igwe dịkarịsịrị elu na nke kachasị dị ala.
5. Product ga-eme n'ọdịnihu na ngwa nke 5T / ụbọchị flake ice igwe.
Akọrọ na-oyi kpọnwụrụ ice flakes na zuru okè jụrụ arụmọrụ. Enwere ike iji flakes mmiri mee ihe maka mmiri na-eri mmiri, na-edebe nri ọhụrụ, nhazi nri, ime ka ihe dị jụụ, n'ụgbọ azụ azụ, ojiji kemịkalụ na ihe ndị ọzọ.
6. Dnyefe, mbupu, ọrụ na akwụkwọ ikike nke igwe igwe ice ice 5T / day.
Otu ihe dị ka ụkwụ ụkwụ 20 karịrị iji zuru otu osisi ice flake zuru ezu, gụnyere 5T / ụbọchị flake ice igwe, ime ụlọ ice, etiti ígwè iji kwado igwe akpụrụ na nwa nwoke.
Anyị na-enye ọrụ ịntanetị maka n'efu na ndụ igwe ogologo oge. Anyị na-enye mmiri n'efu site n'aka DHL ma ọ bụrụ na akụrụngwa igwe nwere nsogbu dị mma n'ime akwụkwọ ikike.
The flake ice evaporator akwụkwọ ikike bụ afọ 20, anyị na-ekwe nkwa na evaporator enweghị gas na-eri eri, ọ dịghị malformation n'ime afọ 20.
Afọ 3 bụ maka ikike nke Motors, nfuli, biarin, fans, ihe eletriki na akụkụ ndị ọzọ na-akpụ akpụ.
Afọ 15 bụ ikike maka arịa nrụgide, condenser, compressor, valves na na.
7. Ajụjụ gbasara 5T / ụbọchị flake ice igwe.
Q: Ego ole ka 5T / ụbọchị flake ice osisi?
A: Ọnụahịa maka osisi ice flake 5T / ụbọchị dị n'etiti USD 13500 na USD 20000.
Ọnụahịa ndị a dabere na ndepụta akụrụngwa igwe na ọnụ ụlọ ime ice. Ọnụahịa ndị a dabere na FOB SHENZHEN USD, ha anaghị agụnye ọnụego ibu. Ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ibu ahụ n'onwe ha.
Q: Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti anyị flake ice igwe na ndị ọzọ na China flake ice igwe?
Azịza: nnukwu ọdịiche dị na teknụzụ anyị na-azọpụta ike.
Anyị na-eji Chromed sliver alloy iji mee evaporator maka arụmọrụ kachasị mma na arụmọrụ kachasị mma.
N'otu ọnọdụ ọrụ ahụ, igwe igwe m 5T / day flake na-ere ọkụ 375KWH nke ọkụ eletrik kwa ụbọchị, ebe ndị ọzọ na-acha ọkụ ice na-ere ihe dịkarịa ala 525KWH kwa ụbọchị.
Kwa ụbọchị, ihe dị iche bụ 150KWH nke ọkụ eletrik.
N'ime afọ 10, ihe dị iche bụ 547,500 KWH nke ọkụ eletrik.
N'ime afọ 20, ọdịiche bụ 1,095,000 KWH nke ọkụ eletrik.
Biggestzụ ahịa gị kachasị wuru ewu maka imepụta ice bụ ọkụ eletrik. Igodo nke azụmahịa ice na-aga nke ọma na nke bara uru bụ teknụzụ ikike ịchekwa igwe.
Site na teknụzụ m na-azọpụta ike, ịnwere ike ịbawanye uru ice gị site na ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọkụ eletrik pere mpe.
Site na teknụzụ na-azọpụta ike m, ị nwere ike ire ọnụ ala na ọnụ ala karịa ndị na-asọmpi gị, n'oge na-adịghịkwa anya ị nwere ike ịchụpụ ndị asọmpi gị n'ahịa.
Ihe bụ ihe ọzọ, anyị nwere ọzọ ngwaọrụ-enyere gị aka maka ike ịzọpụta.
Ka anyị kpọọ ya nchekwa nchekwa. Enwere ike ihichapụ ebili mmiri eletrik na-abaghị uru / na-enweghị isi site na nchekwa nchekwa, yabụ, ọ nwere ike belata njiri ike nke usoro ihe niile site na 5% -8%.
Ọnụahịa nke nchekwa nchekwa na-amalite site na USD 3000 / set, ma ọ dabere na ike zuru ezu nke sistemụ.
USD 3000 bụ ọnụahịa maka nchekwa nchekwa ice 5T / day flake.
10T / ụbọchị flake ice igwe
15T / ụbọchị flake ice igwe
20T / ụbọchị flake ice igwe
25T / ụbọchị flake ice igwe
30T / ụbọchị flake ice igwe
Igwe ice buru ibu buru ibu
Nke gara aga: Igwe akpụrụ mmiri nke 0.6T cube
Osote: 30T flake ice igwe